Umlando wezindleko, ingubo yomshado eRussia
Ubudlelwane Wedding Imikhuba Yomshado Nemikhuba
Isihloko sendaba yethu yanamuhla sithi "Umlando we-Costume, i-Wedding Dress eRussia".
Umshado ... Uzihlanganisa nani leli gama? Umgqobo omhlophe womlobokazi ngumcabango wokuthi cishe uvela kuwo wonke umuntu wokuqala ... Yebo, namuhla kuyisiko, nokho eNkathini Ephakathi eFrance abashadikazi bakhetha i-white claret ngoba bacabanga ukuthi lo mbala uzokwenza amadoda ahambe ngobuhlanya kusukela manje intshisekelo nothando ngabo. Noma, isibonelo, uma intombazane igqoke ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka noma eluhlaza okwesibhakabhaka - kuthiwa yayiyivikela emangeni kamamazala.
Ngakho-ke, esihlokweni sami ngingathanda ukukhuluma ngezingubo zomshado emazweni ahlukene futhi kusukela ngangiqala neFrance, ngizoqhubeka ngakho. Kodwa ngizokuthinta okuningi amasiko endulo.
I-France yizwe eliyi-trendsetter. Kuzo zonke iziFulentshi ikakhulukazi isiFulentshi, ukuthanda abantu ngabanye kubonakala, ngakho-ke, zonke izingubo eFrance azifani nhlobo. Isici sezingubo zesiFulentshi yizigqoko, inani lalo elingenakubalwa ngokwezifiso zabo. Isitayela sesigqoko sincike endaweni yomlando lapho ihlala khona, ngokwesibonelo, eNormandy izigqoko zaziphakeme futhi zabizwa ngokuthi yi-bourgeois. Kodwa isihloko se-Alsace sasibhekwa njengomnsalo omkhulu wesilika obomvu noma omnyama. Ngokwesiko, owesifazane ongumFulentshi endlini yakhe yangasese yomshado kumele abe khona izinto ezine: into ethile eluhlaza okwesibhakabhaka, into endala, mhlawumbe izuzwe ngugogo wakhe ngokulandelana, into entsha neyodwa into ebolekiwe, kaningi vele uthathe le nto kumngani. Kumele kuqashelwe ukuthi lesi siko siye sabonwa ngabesifazane baseFrance ngisho nanamuhla, kodwa manje sekuyiyona nendima yemidlalo ethile futhi kakade baphatha lesi siko ngokuhlekisa. Futhi kule suti kwakukhona izinto ezine ezazingezansi zobulili: ibhande elidalwa ngumyeni kuphela, i-apron, izicathulo ezisho ukuthi zibambene futhi zihlangene, ngokuvamile izicathulo zanikelwa umkhwenyana futhi, ngokuqinisekile, umkhwa wendabuko.
E-Italy, abashade babegqoke izingubo ezibhubhisa ngokuphelele ama-canon ase-European beauty. Imfashini yayifaka amafomu amahle, okwakubhekwa njengobonakaliso obuphakeme kakhulu besifazane: engxenyeni engenhla yembatho kwakukhona isibalo sabantu besifazane, futhi kusukela okhalweni kwasakazeka ngamahlumela alula. Iqiniso elithakazelisayo: e-Italy kukholelwa ukuthi amaparele akusiza ukuqinisa ubudlelwane bomndeni, kulokhu kuxhumano, amaNtaliyane emakhanda abo omshado azama ukukhipha amapharele amaningi ezinhlathini zabo. Ngaphezu kwalokho, bafaka endlini yangasese yomshado ngempela umgexo weparele, umgexo noma isongo.
Futhi manje sizoshiya amasiko aseYurophu futhi sibone amasiko aseIndia ekude. Kufanele kuqaphele ukuthi kwakuseNdiya ukuthi wonke amasiko emikhuba yomshado, kuhlanganise nezembatho zomshado, agcinwe kuze kube yilolu suku. Wedding sari - lena igama lesambatho somshado wesifazane waseNdiya. I-sari yomshado ivame ukubomvu futhi ithathwa njengengubo yomkhwenyana. Ngomsindo we-sari benza futhi bavale ekhanda lomfazi waseNdiya. I-Sari ihlotshiswe ubuhlalu obuhlukahlukene, ehlotshiswe nge-embroideries negolide kanye nezintambo zokuthutha kanye namaphethini. Ngokuvamile kunalokho, ingubo enjalo ingumsebenzi wobuciko, lapho abanikazi bezandla nabadwebi bebenza khona. Ukuqaphela okukhethekile kubhalwa ukuhlobisa ama-indian. Umhlobiso womlobokazi uthola ifa, uyithenga ngaphambi komshado olandelayo noma kunikezwa izihlobo. Amacici, izindandatho, imihlobiso elengayo, namasongo nemigexo, amavidyo, indandatho ekhaleni - konke lokhu kufanele kube kumaNdiya ngalolu suku olubalulekile. Omunye wamasiko amadala endala "umbala" wokukhethwa komakoti nokubeka ichashazi ebunzini, umakoti wenza konke lokhu kudweba obomvu. I-Indian iyashada ingubo yezicathulo, futhi kulokhu kuhlanganiswa, ukugxila okukhethekile kuhlanganiswe nomhlobiso wezinyawo. Kusukela esiqongweni sezinwele kuya esiqongweni sezipikili ... Le ndlela okufanele uhlathulule ngayo ishado semishado yomlobokazi waseNdiya.
Umlando wengubo, ingubo yomshado eRussia nayo yaba nendima enkulu. Ezinsukwini zakudala kwakukholelwa ukuthi intombazane eshada "ifile" ngokuphila kwayo kwentombazane eyedlule kanye nomndeni wayo, futhi ngemva komshado waya emndenini womyeni wayo. Ngakho-ke, emshadweni, le ntombazane yayigqoke "ukulila", izingubo ezinesizotha futhi ezidabukisayo. Abanye bahamba ngaphansi komqhele esembatho esimnyama nesigqoko somnyama. Ngemva komkhosi womshado, umakoti ugqoka imikhosi, evamile, egqoke imbobo ebomvu, efanekisela ukuqala kokuphila okusha. Ukugqoka komlobokazi waseRussia kwakuhle kakhulu. Wabonisa amakhono nobuciko bomfazi ozayo kanye nenkosikazi yezandla, kanye nenhlalakahle yempilo yomndeni. Ngokuvamile ama-sarafans adluliselwa kusukela esizukulwaneni kuya esizukulwaneni, kusukela kuninini kuya kumntombazane, futhi kusukela endodaneni kuya kumzukulu futhi ayeyingxenye yomdanso womakoti. Le ngubo yayihlotshiswe ubuhlalu, amaparele, izinwele zegolide, ama-furs nesisindo sembatho enjalo safinyelelwa ngezinye izikhathi ama-kilogram ayizinkulungwane eziyishumi nanhlanu. Ngaphansi kwe-sarafan, umakoti waseRashiya wayegqoke iziketi eziningi, ngaleyo ndlela enze ukuba abe nombukiso ovelele kakhulu. Umhlobiso wekhanda wawuyi-wreath eboshwe ngezimbali zasendle. Futhi emva kwesikhashana amagceke ashintshwa ama-ribbons, ama-hoops kanye ne-kokoshniki.
Imfashini yesimanje ivumela umakoti cishe wonke amazwe ukuba akhethe noma yikuphi ukugqoka ngokusho ukunambitheka nokuzizwa kwawo. Namuhla, umakoti ngaphambi komkhwenyana angabonakala kunoma yisiphi isifiso, mhlawumbe indodakazikazi ephakathi noma ibhizinisi futhi owesifazane osebenzayo ku-suit eqinile, kungaba unkulunkulukazi ongumGreki noma intombazane ephupho futhi ethandanayo ngesitayela se-hippy ...
Imibono emihlanu yesigqila somshado
Amasiko omshado namasiko
Isinkwa somshado: amasiko nesimanje
I-Garter yomlobokazi, kungani?
Amasiko omshado athakazelisayo abantu bomhlaba
Yimiphi imikhuba emshadweni?
Amasiko omshado wamazwe ahlukene nabantu bezwe
Ukunakekelwa kahle kwezingubo ze-suede
Ngaki kaningi ongalingani nabantu abadala?
Ubulili okungahleliwe: izimbangela nemiphumela
Ingabe ama-parabens, amasulfa nama-silicones ayingozi kuma-cosmetics awonakele kangaka?
Amaski ebusweni ngamafutha e-peach
Okufanele kube yingxenye yekhrimu enhle yokulwa nobunzima
Isobho laseTurkey ngamaqebelengwane e-oat
Ukuxazulula zonke izinkinga zengqondo - ngaphakathi kwakho
Ukudla okuncane okuncane kwengane, noma Kungani ingane ingadli
Indlela yokuhlangana nomakhelwane wesoka
Iyiphi inja ingane enayo?
Ukudla okulimazayo kakhulu emhlabeni
I-liposuction ayifuni ukusetshenziswa kakhulu ekukhulupheni okubalulekile kunezindawo eziseduze zendawo
Emkhakheni we-Apgar - ubude nesisindo
Nini ukuya eYurophu: khetha inkathi nesikhathi
Indlela yokunaka i-Taurus yesilisa